[Review] Top 5 quạt treo tường mini tốt giá rẻ nên mua nhất | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 5 quạt treo tường mini tốt giá rẻ nên mua nhất | Muasalebang
Quạt 0 lượt xem 12/04/2022
Đang Đọc: [Review] Top 5 quạt treo tường mini tốt giá rẻ nên mua nhất | Muasalebang in Muasalebang
Ifeni yodonga oluncane iwumugqa womkhiqizo wabalandeli bakagesi abanosayizi ohlangene namandla aphansi avame ukusetshenziselwa izikhala ezincane. Lo mkhiqizo unezinzuzo eziningi ezivelele ngaphezu kwabalandeli bakagesi abavamile, ngakho-ke ukhethwa ngabasebenzisi abaningi. Ngakho-ke hlanganyela nathi ukuze ufunde mayelana Abalandeli abangu-5 abahamba phambili abashibhile bodonga oluncane abangaluthenga namuhla Bheka isihloko esingezansi!
1 Isizathu sokuthi ukhethe ukuthenga i-mini wall fan
2 Imibandela yokukhetha i-mini wall fan efanelekile kakhulu
3 Abalandeli abangu-5 abahamba phambili abashibhile bodonga lwama-mini ongazithenga
3.1 3.1 I-Panasonic mini wall fan F409MB
3.2 3.2 Intengo eshibhile i-Lifan T109 22W mini wall fan
3.3 3.3 Ifeni yodonga lwangempela lwe-Bifan T300 mini
3.4 3.4 I-Senko TR828 mini wall fan ene-remote control
3.5 3.5 I-Vinawind mini wall fan QTT300-ED
Isizathu sokuthi ukhethe ukuthenga i-mini wall fan
Ifeni yodonga oluncane umshini wasendlini owaziswa kakhulu futhi osetshenziswa kakhulu emakethe namuhla. Uma ukhetha ukusebenzisa le fan mini yodonga, inikeza abasebenzisi izici ezilandelayo ezivelele:
Umkhiqizo unomklamo ohlangene ofanele izindawo ezincane, izidingo ezincane noma imindeni enezingane ezincane. Ngesikhathi esifanayo, le fan ifakwe odongeni, ngakho futhi ikhawulela umthelela kanye nomonakalo.
Le fan yodonga inomthamo wokusebenza ophansi olungele ukusetshenziswa futhi isiza ukonga amandla ngokufanele.
Lo mkhiqizo kulula ukuwusebenzisa ngezindlela ezi-3: usebenzisa iknob, isilawuli kude noma intambo yokudonsa. Kuye ngohlobo lwefeni, umphakeli uzohlinzeka ngezindlela ezihlukene zokusebenzisa kubasebenzisi.
Ifeni yodonga oluncane inomthamo omncane kanye nomklamo omncane wokuqinisekisa ukuphepha okuphelele kwezingane ezincane. Izingane azikwazi ukufinyelela fan ngoba ilenga phezulu futhi abazali bangenza eminye imisebenzi ngokuphepha.
Le fan mini yokulenga inesakhiwo esilula nesihlangene, ngakho-ke kulula ukuyihambisa nokuyivula ukuze ihlanzwe ngokushesha futhi kalula.
Izinga lentengo ye i-mini fan efakwe odongeni kunengqondo kunabalandeli abakhulu. Ngesikhathi esifanayo, ukusebenzisa le fan mini kusiza ukonga izindleko ngendlela efanele, kodwa ukusebenza kahle kuyafana.
Imibandela yokukhetha i-mini wall fan efanelekile kakhulu
Ifeni yodonga oluncane ezithuthuke kakhulu ezicini ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokusetshenziswa komndeni nezici ezilula kakhulu. Kodwa-ke, izidingo zomndeni ngamunye zihlukile, uma ukukhetha kungafaneleki, kuzoholela kalula ekuchithekeni noma ukusebenzisa umthamo omkhulu, okubangela ukulimala okusheshayo. Nansi indlela yokukhetha i-mini-wall fan efanelekile, ukuze uthole ireferensi:
Hlola amandla abalandeli
Umthamo osebenzayo uvame ukulingana nesivinini somoya, ngakho-ke umthamo omkhulu, isivinini somoya sizoba namandla futhi ukusetshenziswa kwamandla kuzoba phezulu. Ngakho-ke, lapho ukhetha ukuthenga mini wall fan khona-ke kufanele ubeke phambili imikhiqizo enamandla okusebenza afanele izidingo zakho ukuze ugweme ukumosha ugesi.
Cabangela ukuthi mangaki ama-blade fan odongeni anawo
Iningi lemikhiqizo yabalandeli be-mini wall emakethe abalandeli be-3-blade namafeni ama-5-blade. Uma i-5-blade fan ngokuvamile ingumkhiqizo oziphu, ifeni enama-blade angu-3 ifakwe isilawuli kude ukuze isekele isilawuli kude esilula. Ngakho-ke, intengo ye-3-blade fan nayo ithengiswa ngentengo ephezulu kune-fan 5-blade.
Hlola izici ezihambisana nabalandeli
Abalandeli be-mini wall nabo bahlanganiswe nezici ezihlukahlukene ezihlakaniphile. Izici ezakhelwe ngaphakathi ezifana neleveli yomoya engokwemvelo noma enamandla, imodi yesibali sikhathi, i-engeli yokuzungezisa abalandeli, njll. Ngesikhathi esifanayo, kukhona izisetshenziswa zokulawula ezikude noma ezisebenza ngomshini ukuze zisize ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zokusetshenziswa nokuqinisekisa ukuphepha okuhle kakhulu. Kodwa-ke, izici eziningi, intengo izoba phezulu, ngakho-ke udinga ukucabangela ngaphambi kokukhetha ukuthenga.
Khetha abalandeli bodonga oluncane emikhiqizweni ehlonishwayo neyangempela
Lokhu kuyisici esibaluleke kakhulu futhi esidingekayo lapho ukhetha ukuthenga mini wall fan ezifanele. Ngoba uhlobo lwefeni yodonga lunquma ikhwalithi, ukusebenza nokuphepha komkhiqizo. Ngakho-ke, kufanele ubeke kuqala ukukhetha abalandeli bokulenga ama-mini kusuka kumikhiqizo ehloniphekile enemvelaphi ecacile yokuqina okuphezulu nokusetshenziswa isikhathi eside. Ungakhetha abalandeli bodonga lwama-mini kusuka kumikhiqizo edumile efana neMitsubishi, Senko, Panasonic, njll.
Bhekisela: [Review] Abalandeli bakagesi abahamba phambili abayi-8 abahamba phambili abakhwezwa ngodonga bango-2021
Abalandeli abangu-5 abahamba phambili abashibhile bodonga lwama-mini ongazithenga
Njengamanje emakethe kunemigqa eminingi yabalandeli be-mini wall enamamodeli ahlukene, izici nemikhiqizo. Ake sibheke buyekeza abalandeli abangu-5 abahamba phambili abashibhile bodonga lwama-mini ongazithenga namuhla Okulandelayo:
3.1 I-Panasonic mini wall fan F409MB
I-Panasonic F409MB ingumlandeli wodonga omncane wohlobo lwePanasonic oludumile kubasebenzisi abaningi namuhla. Lo mkhiqizo unomthamo omkhulu kanye nesakhiwo sama-blade angu-3 esinikeza ukupholisa okusheshayo ngokushintshana komoya onamandla endaweni esetshenzisiwe. Ngesikhathi esifanayo, i-engeli yokuzungeza yale fan inkulu kakhulu ezindaweni ezineminyundu emikhulu kanye nokujikeleza komoya okuhle esikhaleni.
Enye indlela, I-Panasonic mini wall fan I-F409MB ihlanganiswe nezindlela ezi-3 zomoya wokukhanya, ophakathi, onamandla nowemvelo ukuze uhlangabezane nazo zonke izidingo zokusetshenziswa. Lo mkhiqizo usebenzisa isilawuli kude esilula, esizwela kakhulu noma ungalawula futhi usethe izinhlelo kuphaneli ye-LED. Ngesikhathi esifanayo, ifeni nayo inemodi yesikhathi ehlakaniphile yokuqinisekisa ukusetshenziswa okufanele nokonga amandla. Lo mugqa womkhiqizo usebenza kahle, awubangi umsindo futhi kulula ukuwuhlakaza ukuze uhlanzwe ngempumelelo.
Intengo yesithenjwa: 1,750,000 VND/ifeni
Funda kabanzi: Abalandeli abangu-8 abathembeke kakhulu bedeskithophu mini
3.2 Intengo eshibhile i-Lifan T109 22W mini wall fan
I-Lifan T109 iwumugqa womkhiqizo mini wall fan kuhle, ikhwalithi ingeyohlobo oludumile lwe-Lifan. Lo mkhiqizo unomklamo ohlangene ofanele ukusetshenziswa kunoma iyiphi indawo, ikakhulukazi labo abanendawo encane. Ngaleyo ndlela, lo fan ukhethwa imindeni eminingi enabantu abambalwa, elungele kakhulu izingane ezincane. Lolu chungechunge lwabalandeli lungalungisa isiqondiso sabalandeli ngokuphendula inkinobho emzimbeni wabalandeli odongeni.
Ngaphezu kwalokho, i-Lifan T109 mini wall fan inamandla angu-22W kanye nesakhiwo se-3-blade ukusiza ukudala umoya opholile ngokushesha endaweni yonke. Lo mkhiqizo unemibala eyahlukene ukuze abasebenzisi bayikhethe ngokukhululekile ngokuya ngendawo yokusetshenziswa. Ngesikhathi esifanayo, idizayini elula, elula ukuyisebenzisa futhi iyiphuzu elivelele abasebenzisi abaningi abalazisayo lapho bebhekisela kulo mkhiqizo.
Intengo yesithenjwa: 2,100,000 VND/ifeni
Buka Okuningi: [Review] Abalandeli abangu-8 abadumile basesilingini eVietnam
3.3 Ifeni yodonga lwangempela lwe-Bifan T300 mini
I-Bifan T300 ingelinye labalandeli be-mini wall eshibhile kakhulu ongayithenga kumkhiqizo we-Bifan. Lo mkhiqizo unomklamo ohlangene, odonsa amehlo ngamathoni angu-2 okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumhlophe ukuze abasebenzisi bazikhethele ngokukhululekile ngokuvumelana nezintandokazi zabo noma isikhala. Lo mugqa wabalandeli bodonga ufakwe ama-blade angu-3 akwazi ukupholisa ngokushesha. Ngesikhathi esifanayo, kukhona nobhasikidi ovikelayo owenziwe ngepulasitiki yokunakekelwa kwekhwalithi ephezulu, ehlala isikhathi eside futhi ephephile.
Ngaphandle kwalokho, mini wall fan I-Bifan T300 inezinhlobo zabalandeli ezingu-3: ilula, imaphakathi futhi iqinile, isebenzisa intambo yokudonsa khona kanye ngaphansi komzimba wabalandeli. Umkhiqizo unomthamo owanele wokusebenza wokupholisa, olungele imindeni enezingane noma ukusetshenziswa endlini yangasese. Ngesikhathi esifanayo, le fan inomklamo oqinile, odala isendlalelo esifanelekile sokuvikela futhi ilengiswe phezulu ukuze isize ukuqinisekisa ukuphepha kwemindeni yezingane ezincane.
Intengo yesithenjwa: 330,000 VND/ifeni
Ukusikisela: Abalandeli abangu-8 abadayise kakhulu abakhohlisayo namuhla
3.4 I-Senko TR828 mini wall fan ene-remote control
I-Senko TR828 iyifeni elihle, elisezingeni elincane le-mini wall ngaphansi kohlobo lwe-Senko. Lo mkhiqizo wenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezinemibala emihle, uthuli oluphansi kanye nomklamo ohlangene ofanele izindawo ezincane. Ngesikhathi esifanayo, le fan inomklamo wama-blade angu-3, ​​cishe ububanzi obungu-40cm, ukusiza ukudala ukugeleza komoya okulinganayo futhi okuzinzile okusatshalaliswa ekamelweni lonke.
Okuningi, mini wall fan I-Senko TR828 ifakwe amandla okusebenza angu-47W, inenjini eyenziwe ngezinto zethusi eziqinile futhi isebenza kahle, inciphisa umsindo. Ngesikhathi esifanayo, ifeni inamamodi omoya angu-3 ukunikeza abasebenzisi ukuguquguquka kokukhetha izinga elifanele lomoya ngezidingo zabo. Lo mkhiqizo ulungisa ngesilawuli kude futhi uvumela ukusetha isibali sikhathi ukuthi sivale kufika emahoreni angu-12. Lolu chungechunge lwabalandeli luphinde luqinisekise ukuphepha, ikakhulukazi emindenini enezingane ezincane ngenxa yekhono layo lokunqamula amandla ngokuzenzakalelayo lapho lilayishwe kakhulu.
Intengo yesithenjwa: 450,000 VND/ifeni
Ezinye izindatshana: [Review] Ingabe i-Rapido air conditioner inhle? Iluphi uhlobo okufanele ngiluthenge?
3.5 I-Vinawind mini wall fan QTT300-ED
I-Vinawind QTT300-ED ingumlandeli wodonga omncane othole ukubonga okuningi kumakhasimende awusebenzisile. Lo mkhiqizo unomklamo ohlangene ongasetshenziswa kunoma iyiphi indawo, ngisho namakamelo amancane, ukuze wonge isikhala ngempumelelo. Ngesikhathi esifanayo, ifeni inekhono elihle lokonga amandla nokusebenza okuzinzile ngesikhathi sokusetshenziswa.
Ngaphandle kwalokho, i-Vinawind QTT300-ED mini wall fan isebenza kahle, inciphisa umsindo kahle futhi ayithinti imisebenzi yansuku zonke. Le fan inezivinini zomoya ezi-3 ukusuka ekukhanyeni, okumaphakathi ukuya kokunamandla, okwenza kube lula ukulungisa ngokuya ngezidingo zokusetshenziswa ngokudonsa imizuzwana noma ukujika ifindo. Lo mugqa womkhiqizo usekela umoya opholile ukuletha umoya omusha egumbini lonke.
Intengo yesithenjwa: 340,000 VND/ifeni
Hlola okwengeziwe: [Review] Abalandeli abangu-6 abathengisa kakhulu be-Kangaroo air conditioner
Nansi imininingwane mayelana Abalandeli abangu-5 abahamba phambili abashibhile bodonga oluncane abangaluthenga namuhla. Ngiyethemba ukukusiza ukuthi uqonde kangcono futhi ngaleyo ndlela ube nolwazi olwengeziwe lokukhetha ifeni efanelekile yodonga oluncane ukuze uhlangabezane nezidingo zakho.
Xem Thêm Quạt mini để bàn, cầm tay, đế kẹp | Muasalebang
Hoa tiêu là gì? Những ý nghĩa thường được dùng của từ hoa tiêu | Muasalebang
Hướng dẫn cách sử dụng nồi cơm điện Sharp | Muasalebang
[CHI TIẾT] Cấu Tạo Quạt Trần Bao Gồm Những Bộ Phận Gì? | Muasalebang
[CHI TIẾT] Hướng Dẫn Cách Đấu Hộp Số Quạt Trần An Toàn, Đúng Cách | Muasalebang